Bamdev Poudyal संघीयतामा शिक्षकको दुर्दशा वा अवसर ? अब संघीयतामा शिक्षाको आधारभूत तथा माध्यमिक तह स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएपछि दलहरुले शिक्षकहरुलाई राम्ररी तह लगाउने भए । सबभन्दा पहिलो त शिक...
शिक्षा मन्त्री ज्यू, बरु राजिनामा दिनुस्
Santosh Paneru शिक्षा मन्त्रि ज्यु , तपाईले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना बितेछ । मन्त्रि भैसकेपछि ४२ औं दिनमा असोज २० गते तपाईले सार्वजनिक गरेको १९ बुदेँ तात्कालिन कार्ययोजना मेरो अगाडी छ । त...
शिक्षक कर्मचारी राजनीतिमा नेताले के गर्ने ?
Bishnu Raj Upreti यो देशमा ब्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक सबैले राजनीति गर्ने हो भने नेताहरुले चाहीँ के गर्ने होला ? सबैले बरु आफ्नै काम गरे त नेताहरुले पनि पूर्ण रुपमा काम गर्न पाउँथे...
शिक्षा मन्त्रीका गफै धेरै !
सुदर्शन पराजुली गफ धेरै सुनियो मन्त्री ज्यू, अब छिटोभन्दा छिटो नियमावली ल्याएर अस्तब्यस्त शिक्षा क्षेत्र सुधार्नुहोला।
आयोग पास गरे पनि पदस्थापन हुन आन्दोलन नै गर्नु पर्ने ?
- राम अाचार्य / के गर्न खोजेको ...? नीति नियम अनुसार गर । म र म जस्ता शिक्षक सेवा आयोग पास गरेकाहरू कति दिन अलमलमा बस्ने ? हैन आयोग पास गरे पनि पदस्थापन हुन आन्दोलन नै गर्नु पर्ने भो कि क्या हो...?
इमान्दार शिक्षकलाई कारवाही !
Sumit karna निजामति कर्मचारीका बच्चाहरु चाँही जहाँ पढेपनि हुने, शिक्षकका छोरा छोरी चाँही सरकारी विद्यालयमै पढ्नु पर्ने किन ? सामुदायिक विद्यालयको स्तर विग्रनु त्यहाँ बाट हुन्छ जहाँ राजनीतिक ठेकेदार...
सामुदायिकका शिक्षकको भोगाइ : कसैको हाजिरी घण्टा मिनेटमै रातो, कसैको केही नगर्ने !
- भानु भक्त राजबंशी सरकारी स्कुलमा तालिम होईन निति र कार्यान्वयनको आवश्यकताका साथ साथै समान व्यवहारको आवश्यकता छ । किनकि सामुदायिक स्कुलमा : १. त नयाँ, म पुरानो २. त जुनियर, म सिनियर ३. त...
सामुदायिक विद्यालयमा टाइ
Tikaram Yatri नेपालमा निजी विद्यालय खुलेदेखि नै टाइ संस्कृति भित्रिए पनि योे आम प्रबृति र प्रचलन भइसकेको थिएन । तर पछिल्ला बर्षहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य बनाए...
शिक्षक नेतागण के यहि हो कानूनी राज्य ?
2069 सालमा बिज्ञापन गरी 2071 सालमा निकै ठुलो सङ्ख्या मा 2063 पछिका अस्थायी शिक्षकहरुलाइ बिस्थपित गरियो। तर कोहि भने अहिलेसम्म कार्यरत छन। जागिर खोसिएका चाही यता न उता भए। तर जोगिएका लाइ फेरि नयाँ...
सभासद्लाई झण्डै दुई लाख शिक्षकलाई ६ हजार ?
Lal Bahadur BC सभासद्हरुलाई मासिक एकलाख पचासी हजार तलबले पुगेन भनी हिजो सदनमा कुरा उठाएछन । १० देखि ४ बजे सम्म साना नानी बाबुलाई पढाउने बालविकासका शिक्षकको मासिक तलब मासिक ६ हजार मात्र छ । किन...
"यस म्यान" जम्मा गरेर शिक्षा मन्त्रालय छलफलमा
Mana Prasad Wagley प्रोजेक्टमा आधारित विश्वविद्यालय विश्व बैंक र एसियाली बिकास बैंकमा पहिला सल्लाहकार भएर काम गरेका केही विद्वानलाई अव विश्वविद्यालय खोलेर कमाउने धन्दाको धून चलेको छ/ राष्ट्...
आवश्यकता रहेन विद्यालय व्यबस्थापन सिमितिको
Megharaj Paudyal शत प्रतिशत सरकारी अनुदानमा चलेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यबस्थापन सिमितको आवश्यकता छैन । यो स्थानीय साधन श्रोत जुटाउने नभै भएको श्रोत बाँडी खाने र राजनीतिक अखडा बनाउने...
म त अझ पनि भन्छु कि सिंहदरबार होइन पढ्ने सामग्री, घेराउ गर
म त अझ पनि भन्छु कि सिंहदरबार होइन पढ्ने सामग्री, घेराउ गर । आन्तरिक आयोगको तयारी गर । तर मित्रहरूको बुद्धि पलाउदैन, भन्छन् मागेर, खोसेर, चोरेर, झगडेर, जबर्जस्ति गरेर, ताण्डव मच्चाएर, कब्जा गरेर ह...
निजी स्कूलको बेथितीबारे एक कविता : स्कूल खोलौँ
हिजोको सेरे आज सर भएछ पढाउन स्कूल गयो हिजोकी मुसी आज मिस भइछ किताब च्यापी पढाउन थाली हामीले पनि ABCD र कखग जानेकैछौँ सुरूमा म नेपाली पढाउँछु तिमी अङ्ग्रेजी पढाऊ म संस्थापक अध्यक्ष बन्छु ति...
दशैंमा होमवर्क : वाहियात काम लगाउने माष्टर
Yograj Dhungana माष्टर कस्ता भने दशैंमा भक्कुमार होमवर्क दिएर घुँडा धसाउन पर्छ भन्नि कस्ता कस्ता वाहियात काम लगाउँथे भने सबै पाठ कापीमा सारेर ल्याउने, जाँचमा गलत लेखेको उत्तर १० पान्ना लेखेर ल्...